Usatambira pedyo nevanhu vanoshungurudza vamwe. Edza nepose paunogona kuti usatambira pedyo nevanhu vanoshungurudza vamwe.—Zvirevo 22:3.
“Usatambira pedyo nevanhu vanofarira zvokushungurudza vamwe. Yeukawo kuti vanhu vanoshungurudza vamwe vanewo zviri kuvanetsa. Ukazviziva, zvinogona kukubatsira kuti usanyanya kurwadziwa nemashoko avanotaura.”—Antonio.
“Iva nechivimbo pane zvaunoita. Usatya kutsigira zvaunotenda. Vanhu vakawanda vanoshungurudza vamwe havazorambi vachikushungurudza kana vakaona kuti zvavari kuita hazvisi kushanda uyewo iwe wacho hausi kuvatya.”—Jessica.
“Kazhinji vanhu vanenge vashungurudzwa vanozeza kumhan’ara nemhaka yokuti vanenge vachitya kuti munhu akavashungurudza anogona kutowedzera kuvashungurudza kana kuti vavanodzidza navo vanozovaona sevatengesi. Vanogona kunge vachifunga kuti kunyange vakamhan’ara hapana chinoitwa. Kunyange zvakadaro ndinokurudzira munhu anenge achishungurudzwa kuti amhan’are. Kuita izvi ndiko kugona uye zvinogona kubatsira kuti vamwe vasashungurudzwa.”—Jenilee, aimbova mudzidzisi pane chimwe chikoro kuUnited States.
Ichokwadi. Somuenzaniso, Bhaibheri rinotaura kuti kwaiva nevaNefirimu, richireva “Vanhu Vanowisira Vamwe Pasi.”—Genesisi 6:4.
Ichokwadi. Vanoshungurudza vamwe vanogona kuchinja mafungiro avo uye maitiro avo kana vakabatsirwa.—VaEfeso 4:23, 24.